Igama ngoku - noMark Mallett-
Umculo & Iziganeko
UKULALA NGABANTU NENKULULEKO
ISILINGO SONYAKA WESIXHENXE
I-WEBCAST & IIVIDIYO
APHO KUTHINJELWA IZULU
Iifilitha zohlobo oluqhelekileyo
Ubuhlwempu belixesha langoku
ezaposwa ngomhla January 13, 2022 January 16, 2022 by uphawu
Ukuba ungumrhumeli kwiLizwi ngoku, qiniseka ukuba ii-imeyile eziya kuwe "zigunyaziwe" ngumnikezeli wakho we-intanethi ngokuvumela i-imeyile evela ku-"markmallett.com". Kwakhona, jonga inkunkuma yakho okanye ifolda ye-spam ukuba ii-imeyile ziphelela apho kwaye uqiniseke ukuba uziphawula njenge "hayi" inkunkuma okanye i-spam.
PHA zizinto ezenzekayo esimele sinikele ingqalelo kuyo, into eyenziwa yiNkosi, okanye ubani anokuyithetha, eyivumela. Kwaye oko kukuhlutywa koMtshakazi waKhe, uMama iBandla, kwiingubo zakhe zehlabathi nezingcolisiweyo, ade eme ze phambi kwaKhe.Qhubekeka ukufunda →
Impendulo kuJimmy Akin-Icandelo 2
ezaposwa ngomhla January 11, 2022 January 12, 2022 by uphawu
IIMPENDULO ZIKATOLIKA Umthetheleli we-cowboy, uJimmy Akin, uyaqhubeka nokuba ne-burr phantsi kwesali kwiwebhusayithi yethu, Ukubuyela eBukumkanini. Nantsi impendulo yam kukudubula kwakhe kwamva nje…Qhubekeka ukufunda →
ezaposwa ngomhla January 5, 2022 January 8, 2022 by uphawu
... akukho namnye imfama ngaphezu kwalowo ungafuniyo ukubona,
naphezu kwemiqondiso yamaxesha axelwe ngenxa engaphambili,
ukwala ukujonga okwenzekayo.
-UMama wethu kuGisella CardiaNge-26 ka-Okthobha ka-2021
NDINGU Ufanele ukuba neentloni ngesihloko seli nqaku - ube neentloni zokuthetha ibinzana elithi "amaxesha okuphela" okanye ukucaphula iNcwadi yeSityhilelo ngokungabi nasibindi sokukhankanya imbonakalo kaMarian. Ezo zinto zamandulo kucingelwa ukuba zezothuli lweenkolelo zamaxesha aphakathi kunye neenkolelo zamandulo “kwisityhilelo sabucala”, “isiprofeto” kunye naloo mazwi alihlazo “ophawu lwerhamncwa” okanye “umchasi-Kristu.” Ewe, kulunge ngakumbi ukubashiya kwelo xesha lolonwabo xa iicawa zamaKatolika zaziqhumisa iziqhumiso njengoko zazigxotha iingcwele, abefundisi beshumayela abahedeni, yaye abantu abaqhelekileyo eneneni babekholelwa ukuba ukholo lwalunokuzigxotha izibetho needemon. Ngaloo mihla, imifanekiso eqingqiweyo nemifanekiso yonqulo yayingahombisi iicawa nje kuphela kodwa nezakhiwo zikawonke wonke nemizi. Khawufan’ ucinge. "Ixesha lobumnyama" - abangakholelwa kuThixo abakhanyiselweyo bayawabiza.Qhubekeka ukufunda →
ezaposwa ngomhla Disemba 24, 2021 Disemba 25, 2021 by uphawu
UYESU wazalwa ebusuku. Wazalwa ngexesha apho uxinezeleko luzalise umoya. Wazalwa ngexesha elifana nelethu. Ngaba oku akunakusenza sibe nethemba?Qhubekeka ukufunda →
KwiMisa eQhubela Phambili
ezaposwa ngomhla Disemba 21, 2021 Disemba 23, 2021 by uphawu
…iCawe nganye kufuneka ihambelane neCawe yehlabathi
kungekuphela nje imfundiso yokholo kunye nemiqondiso yomthendeleko,
kodwa ngokunjalo ngokubhekiselele kusetyenziso olufunyenwe jikelele kwisithethe sabapostile nesingaqhawukiyo.
Oku kufuneka kuqwalaselwe kungekuphela nje ukuze kuphetshwe iimpazamo;
kwanokuba ukholo lugqitywe ngengqibelelo yalo;
ekubeni umthetho weCawa womthandazo (lex orandi) iyahambelana
kumthetho wakhe wokholo (lex credendi).
—Umyalelo Jikelele weMisele yamaRoma, uhlelo lwesi-3, 2002, 397
IT Isenokubonakala inqabile into yokuba ndibhale ngengxaki eqhubekayo ngeMisa yesiLatini. Isizathu kukuba andizange ndiye kwinkonzo eqhelekileyo ye-Tridentine ebomini bam.Ndaya kumtshato weTridentine, kodwa umfundisi wayebonakala engayazi into awayeyenza kwaye yonke imfundiso yayithe saa kwaye ingaqhelekanga. Kodwa yiyo loo nto kanye ndingumntu ongathathi hlangothi ndinethemba lokuba kukho into eluncedo yokongeza kwincoko…Qhubekeka ukufunda →
Ndaya kumtshato weTridentine, kodwa umfundisi wayebonakala engayazi into awayeyenza kwaye yonke imfundiso yayithe saa kwaye ingaqhelekanga.
Ukukhusela Abamsulwa Bakho Abangcwele
ezaposwa ngomhla Disemba 21, 2021 Disemba 22, 2021 by uphawu
I-Renaissance Fresco ebonisa ukubulawa kwabantu abamsulwa
kwiCollegiata yaseSan Gimignano, eItali
INTO yonakele kakhulu xa umyili wetekhnoloji, ngoku esasazwa kwihlabathi liphela, efuna ukuba imiswe ngoko nangoko. Kolu sasazo lwewebhu lukhathazayo, uMark Mallett kunye noChristine Watkins babelana ngokuba kutheni oogqirha kunye nezazinzulu zilumkisa, ngokusekwe kweyona datha intsha kunye nezifundo, ukuba ukutofa iintsana kunye nabantwana ngonyango lovavanyo lwemfuza kunokubashiya benesifo esiqatha kwiminyaka ezayo… esinye sezona zilumkiso zibalulekileyo esizinikileyo kulo nyaka. Ukufaniswa kokuhlaselwa kukaHerode kwabamsulwa ngeli xesha leKrismesi kuyaqondakala. Qhubekeka ukufunda →
Impendulo kuJimmy Akin
ezaposwa ngomhla Disemba 15, 2021 Disemba 23, 2021 by uphawu
KATHOLIC Ummeli woxolo uJimmy Akin ubhale inqaku elibuza intembeko yewebhusayithi kadadewethu, iCountdown to the Kingdom.Qhubekeka ukufunda →
Ukukhutshwa kweNoveli entsha! IGazi
ezaposwa ngomhla Disemba 10, 2021 Disemba 10, 2021 by uphawu
NOKUSHICELELA inguqulelo yokulandelelana Igazi iyafumaneka ngoku!
Ukususela ekukhululweni kwenoveli yokuqala yentombi yam uDenise Umthi kwiminyaka esixhenxe eyadlulayo-incwadi eyafumana uphononongo oluhle kunye neenzame zabanye zokuyenza ibe ngumboniso bhanyabhanya - silindele enye ilandelayo. Kwaye ifikile ekugqibeleni. Igazi iqhubeka ibali kwindawo yasentsomini kunye negama likaDenise elimangalisayo lokubumba abalinganiswa bokwenyani, ukwenza umfanekiso ongakholelekiyo, kwaye wenze ibali lihlale ixesha elide emva kokuba uyibeke phantsi incwadi. Imixholo emininzi kakhulu kuyo Igazi sithethe ngokunzulu kwixesha lethu. Bendingenakuzingca njengotata wakhe… kwaye ndonwabile njengomfundi. Kodwa ungathathi igama lam kuyo: funda uphononongo olungezantsi!Qhubekeka ukufunda →
ezaposwa ngomhla Disemba 8, 2021 Disemba 8, 2021 by uphawu
AS oorhulumente ehlabathini lonke baqalisa ukunyanzelisa iinaliti ezisinyanzelo ngelixa besoyikisa “abangagonywanga”, ngubani kanye kanye odlala iRoulette yaseRashiya ngobomi babanye, ngaphantsi kokwabo? Qhubekeka ukufunda →
UFatima, kunye nokuGungqiswa okukhulu
INDLELA Kwithuba elidlulileyo, xa bendicinga ukuba kutheni ilanga likhangeleka ngathi lihamba ngesibhakabhaka eFatima, kwafika ukuqonda kum ukuba ayingombono welanga elihambayo ngomntu ngamnye, kodwa umhlaba. Kulapho ndaye ndacinga ngokunxibelelana phakathi “kokushukuma okukhulu” komhlaba okuxelwe kwangaphambili ngabaprofeti abaninzi abathembekileyo, kunye "nommangaliso welanga." Nangona kunjalo, ngokukhutshwa kweememori zika-Sr.Lucia, ukuqonda okutsha kwiMfihlo yesiThathu kaFatima kwatyhilwa kwimibhalo yakhe. Kude kube ngoku, into ebesiyazi ngesijeziso somhlaba esimiselweyo (esisinike eli "xesha lenceba") ichaziwe kwiwebhusayithi yeVatican:Qhubekeka ukufunda →
1 2 3 4 5 6 ... 170 Okulandelayo »
IMAPHA YAMAZULU (5)
UKUQALA KWAKHONA (5)
UKHOLO NOKUZIPHATHA (179)
UKULALA NGABANTU NENKULULEKO (7)
UKUFUNDA KWENKOSI (311)
UBUNGQINA BAM (5)
UKUTSHINTSHWA NGOKOYIKA (37)
UKUTHANDAZA UMTHANDAZO (44)
ISILINGO SONYAKA WESIXHENXE (11)
UKUTHANDA KUKATHIXO (22)
IXESHA LOXOLO (76)
IZIXHOBO ZOSAPHO (14)
IINTLUNGU EZINTLANU (7)
UVAVANYO OLUKHULU (250)
INYANISO ENZIMA (44)
UHAMBO OLUSHA (10)
IXESHA LOBABALO (122)
IITROLAM ZESILUMKISO! (10)
IVIDIYO NEEPODCASTS (83)
LINDA UMZUZU (3)
APHO KUTHINJELWA IZULU (7)
KUTHENI UNKATHOLIKI? (9)
Archives Khetha inyanga NgoJanuwari 2022 (3) NgoDisemba 2021 (7) NgoNovemba 2021 (7) Oktobha 2021 (6) NgoSeptemba 2021 (5) Nge-Agasti 2021 (5) Julayi 2021 (3) NgoJuni 2021 (2) Ngomhla we-2021 (6) Epreli 2021 (6) Matshi 2021 (9) NgoFebruwari 2021 (10) NgoJanuwari 2021 (9) NgoDisemba 2020 (9) NgoNovemba 2020 (8) Oktobha 2020 (15) NgoSeptemba 2020 (6) Nge-Agasti 2020 (6) Julayi 2020 (11) NgoJuni 2020 (13) Ngomhla we-2020 (9) Epreli 2020 (11) Matshi 2020 (12) NgoFebruwari 2020 (7) NgoJanuwari 2020 (10) NgoDisemba 2019 (7) NgoNovemba 2019 (11) Oktobha 2019 (7) NgoSeptemba 2019 (6) Nge-Agasti 2019 (1) Julayi 2019 (4) NgoJuni 2019 (6) Ngomhla we-2019 (9) Epreli 2019 (15) Matshi 2019 (5) NgoFebruwari 2019 (9) NgoJanuwari 2019 (7) NgoDisemba 2018 (3) NgoNovemba 2018 (10) Oktobha 2018 (8) NgoSeptemba 2018 (5) Nge-Agasti 2018 (4) Julayi 2018 (3) NgoJuni 2018 (6) Ngomhla we-2018 (13) Epreli 2018 (11) Matshi 2018 (8) NgoFebruwari 2018 (13) NgoJanuwari 2018 (11) NgoDisemba 2017 (10) NgoNovemba 2017 (10) Oktobha 2017 (11) NgoSeptemba 2017 (9) Nge-Agasti 2017 (11) Julayi 2017 (9) NgoJuni 2017 (9) Ngomhla we-2017 (10) Epreli 2017 (8) Matshi 2017 (9) NgoFebruwari 2017 (8) NgoJanuwari 2017 (9) NgoDisemba 2016 (14) NgoNovemba 2016 (13) Oktobha 2016 (6) NgoSeptemba 2016 (15) Nge-Agasti 2016 (7) Julayi 2016 (6) NgoJuni 2016 (9) Ngomhla we-2016 (10) Epreli 2016 (7) Matshi 2016 (25) NgoFebruwari 2016 (21) NgoJanuwari 2016 (8) NgoDisemba 2015 (7) NgoNovemba 2015 (9) Oktobha 2015 (11) NgoSeptemba 2015 (9) Nge-Agasti 2015 (5) Julayi 2015 (8) NgoJuni 2015 (8) Ngomhla we-2015 (9) Epreli 2015 (9) Matshi 2015 (27) NgoFebruwari 2015 (17) NgoJanuwari 2015 (11) NgoDisemba 2014 (10) NgoNovemba 2014 (7) Oktobha 2014 (21) NgoSeptemba 2014 (21) Nge-Agasti 2014 (6) Julayi 2014 (6) NgoJuni 2014 (5) Ngomhla we-2014 (19) Epreli 2014 (22) Matshi 2014 (26) NgoFebruwari 2014 (24) NgoJanuwari 2014 (27) NgoDisemba 2013 (24) NgoNovemba 2013 (6) Oktobha 2013 (5) NgoSeptemba 2013 (3) Nge-Agasti 2013 (2) Julayi 2013 (4) NgoJuni 2013 (1) Ngomhla we-2013 (6) Epreli 2013 (7) Matshi 2013 (11) NgoFebruwari 2013 (10) NgoJanuwari 2013 (3) NgoDisemba 2012 (2) NgoNovemba 2012 (3) Oktobha 2012 (3) NgoSeptemba 2012 (5) Nge-Agasti 2012 (1) Julayi 2012 (3) NgoJuni 2012 (5) Ngomhla we-2012 (2) Epreli 2012 (5) Matshi 2012 (5) NgoFebruwari 2012 (7) NgoJanuwari 2012 (6) NgoDisemba 2011 (8) NgoNovemba 2011 (6) Oktobha 2011 (7) NgoSeptemba 2011 (3) Nge-Agasti 2011 (5) Julayi 2011 (4) NgoJuni 2011 (9) Ngomhla we-2011 (4) Epreli 2011 (1) Matshi 2011 (4) NgoFebruwari 2011 (3) NgoJanuwari 2011 (7) NgoDisemba 2010 (7) NgoNovemba 2010 (5) Oktobha 2010 (5) NgoSeptemba 2010 (5) Nge-Agasti 2010 (3) Julayi 2010 (5) NgoJuni 2010 (7) Ngomhla we-2010 (9) Epreli 2010 (14) Matshi 2010 (8) NgoFebruwari 2010 (9) NgoJanuwari 2010 (5) NgoDisemba 2009 (8) NgoNovemba 2009 (6) Oktobha 2009 (5) NgoSeptemba 2009 (4) Nge-Agasti 2009 (4) Julayi 2009 (7) NgoJuni 2009 (7) Ngomhla we-2009 (5) Epreli 2009 (8) Matshi 2009 (2) NgoFebruwari 2009 (8) NgoJanuwari 2009 (13) NgoDisemba 2008 (10) NgoNovemba 2008 (9) Oktobha 2008 (11) NgoSeptemba 2008 (10) Nge-Agasti 2008 (7) Julayi 2008 (2) NgoJuni 2008 (5) Ngomhla we-2008 (7) Epreli 2008 (8) Matshi 2008 (10) NgoFebruwari 2008 (7) NgoJanuwari 2008 (5) NgoDisemba 2007 (12) NgoNovemba 2007 (9) Oktobha 2007 (5) NgoSeptemba 2007 (10) Nge-Agasti 2007 (8) Julayi 2007 (5) NgoJuni 2007 (5) Ngomhla we-2007 (6) Epreli 2007 (7) Matshi 2007 (4) NgoFebruwari 2007 (6) NgoJanuwari 2007 (10) NgoDisemba 2006 (9) NgoNovemba 2006 (10) Oktobha 2006 (10) NgoSeptemba 2006 (24) Nge-Agasti 2006 (19) Julayi 2006 (16) NgoJuni 2006 (21) Ngomhla we-2006 (17) Epreli 2006 (19) Matshi 2006 (22) NgoFebruwari 2006 (16) NgoJanuwari 2006 (16) NgoDisemba 2005 (10) NgoNovemba 2005 (1) NgoJuni 2005 (1) Epreli 2003 (1) Matshi 2003 (1)
Ujoyine ngempumelelo uluhlu lwethu lwababhalisile.
Uyilo lwewebhusayithi © 2022 NgUkuYiza